DAAWO:Mowjado Saameyn ku yeeshay Dekadda Muqdisho oo ku dhuftay Xeebaha Soomaaliya+Xaalada Maanta Oo Ah…… - iftineducation.com
DAAWO:Mowjado Saameyn ku yeeshay Dekadda Muqdisho oo ku dhuftay Xeebaha Soomaaliya+Xaalada Maanta Oo Ah……
aadan21 / April 20, 2016
iftineducation.com – Mowjado xoogan oo watay hirar waa weyn ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhuftay qaar kamid ah Xeebaha Soomaaliya, waxa ayna muujadahan saameyn badan ku yeesheen kaluumeesata .
Wararka aan ka heleyno Dekada Weyn ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mowjdahan watay hiirarka xoogan ay saameyn badan ku yeesheen Dekadda ayna biyo badan soo galeen qeybo kamid ah Dekadda .
Biyahaani wata Hirarka ayaa sababay in Maraakiib ku xirneyd Dekada weyn ay shaqaalahii ka howlgalayay ay ka kala cararaan halkaasi, kana bixiyeen xeebta Maraakiibtooda, kadib cabsi ay ka qabeen in Hirarkaasi ay ku rogmadaan maraakiibta.
Mowjadahaani ayaa waxaa xiliyada qaar ay wataan Dabeylo waxa ayna rogeen Biyihii deganaa ee dadka badan ay ku dabaalan jireen, iyadoo Biyaha ay banaanka usoo durqeen, waxa ayna saameyn ku yeelatay kaluumeesata badda kasoo jilaaban jiray kaluunka.
Aragti laga bixiyay Mowjadaha soo ragmay ayaa waxaa lagu sheegay in 10-kii Sanaba mar la arko iyaga oo wata dabeylo xoogan.
Awooda Mowjadaha ayaa gadiyey Ilaa Sadex Doon oo nooca foolfaha ah kuwaas oo ilaa hadda badda lagu weysanyahay dadkii la socdayna laga soo badbaadiyay.
Xeebaha Magaalooyinka Marka iyo Cadale ayaa iyaguna waxaa laga soo sheegayaa Mowjado lamid ah kuwa ka taagan xeebaha Muqdisho.
Argentina oo suuqa caalamka ku soo noqotay
Daawo Gabadhan: Anigu Waxan Necebahay Ragga iweydiiya Suni Maatahay Mise Fircooni Waxan Ugu Jawaaba Siil Guskaga Ka Weyn baa igu yaalo Nala Daawo Bajaqdani Waxay Ku Hadlayso..